sheeko sheeko sheeko xariir shimbir - iftineducation.com
sheeko sheeko sheeko xariir shimbir
iftineducation.com – Beri baa waxaa deris ahaa laba Shinbirood, Waxay lahaayeen laba buul oo waaweyn, iyagoo doonaya in ay ka ilaaliyaan carruurtooda dhaxanta, roobka iyo Cadceeda (qoraxda).
Si wanaagsan ayey u wada noolaan jireen, Waxaa nafta u keenay galeyr, oo markasta oo ay cunto carruurta u doonaanba u soo daba mara oo cuna ugxanta iyo carruurta yar yar ee aan duuli karin.
Shimbirhii mid ka mida ayaa fikirtey, waxay samaysana way garan weyday, Shinbirtu waligeed dagaal ma gelin mana jecla in ay dagaal gesho. Hase yeeshee waxay go’aan ku gaadhay in ay la dagaalanto galeyrka oo ay ilmaheeda ka ceshato.
Shinbirtii waxay ogaatay in galeyrku ka xoog badan yahay markaa waxay doonatay dab si ay galeyrka iskaga celiso ugana aargoosato.
Waxay soo qaaday, dab olol badan, markaas ayey gurigeedii la timi iyada oo dooneysa in ay galeyrka ku gubto dabka, Hase ahaatee wuxuu dabkii gubay buulkeedii, kii Shinbirta kale, iyo wixii u dhawaa oo dhan. Maahmaah Soomaaliyeed ayaa tidhaahda, “Shinbiri maalin ayey dab qaaday maalintiina min alley gubtay, dadka qaar ayaa maahmaahdanm u yaqaan, “shimbir maalin ayey dab qaaday oo buulkeedii ayey ku gubtay” labada maahmahoodba waa la isticmaalaa”
U jeedadu sheekadan waa haddii aad sameyso waxa aadan aqoon ama waayo aragnimo aadan u lahayn dhibaato ayaa kaasoo gaadhi karta.
Sheeko Sheeko, Sheeko Xariir idheh.
Sheeko Caruureed: Ka faa`iideyso sheeko waliba murtida ku dhaxjirta.